Usoro Mmeghari ohuru na ahia ohuru - Kimroy Bailey Group
Nmeputa Ndumodu ahia ohuru
Nmeputa Ndumodu ahia ohuruKimroy Bailey2020-04-05T06:29:06-05:00
Kimroy Bailey Group Corporate Reliewable Services
Kimroy Bailey Group Usoro Mmeghari azụmaahịa azụmaahịa na-ewepụta isi ọwụwa site na ịhazi oke ikuku mega ma ọ bụ ọrụ ntinye nke anyanwụ. Dịka onye isi na Ngalaba Renewable Energy na Robotics anyị ji mpako ịnye mmezigharị Usoro Mmeghari ohuru iji mee ka ọrụ nke ndị ahịa anyị na ndị ọrụ ha nwee ọfulụ na arụmọrụ ha na-aba uru.
Ebumnuche anyị bụ itinye ebe a na-enweta ọtụtụ ijeri na ụlọ ọrụ ike imeghari ohuru. Anyị na-ebido n’ihu teknụzụ kachasị ọhụrụ ma nye ọzụzụ klaasị ụwa na mmekorita ya na Mahadum Trott Bailey, Ngwanrọ na ngwaọrụ BPO nke mere na ndị ahịa anyị ekwesịghị ịfụ ya ụdi site na idowe usoro. Kama ha nwere ike ilekwasị anya n'ọrụ azụmahịa kwa ụbọchị ma tụkwasị anyị obi maka ngwaahịa ọhụrụ iji mee ka ndị ọrụ ha na-enwe mkpali, ndị ahịa ha na-enwe afọ ojuju na nhụjuanya nke uru ha na-abawanye.
Ofdị Companieslọ ọrụ dị iche iche na-ebunye anyị ọzụzụ ha
Pịa ka ịlele usoro nhazi ọhụụ na-aga n'ihu
Kwesịrị ime Ngwọta Ọha n’ahịa azụmahịa a na-emegharị ọhụụ ma ọ bụrụ na ị bụ
Onye nrụpụta ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ike
Azụmahịa nwụnye anyanwụ
Mahadum / ụlọ akwụkwọ
Onye ọ bụla, Ebe ọ bụla n'ụwa na-arụ ọrụ na obere, nnukwu ma ọ bụ Mega Renewable Energy Project maka: Anyanwụ, Ifufe, Hydro ma ọ bụ Geothermal
Kedu ihe bụ usoro njikwa azụmaahịa ọhụrụ na-eme?
Anyị nwere mkparịta ụka dị mkpirikpi iji hụ ụdị nkwado ị ga-achọ. Anyị nwere ike ijide ọrụ ahụ dum ma ọ bụ naanị otu akụkụ ma ọ bụrụ na ị nweela otu nwere ike ijikwa nkọwa ndị ọzọ.
Ijide aka zuru ezu na imezu ihe a ga-ejedebe
Ọzụzụ na Ọrụ Ngwá Ngwá - Mee ka ndị otu gị aka rụọ ọrụ ahụ mgbe emechara ma nyefee ya na Ọrụ Ọzụzụ na Ngwá Ọrụ
Zuru okè maka ụlọ ọrụ ndị chọrọ iji emelite asambodo ndị ọrụ ha. Nnukwu nkwụghachi ume na teknụzụ na-ewu ewu na atụmatụ ị na-arụ
Usoro Nghazi Mmeghari ohuru na oru nke oru: anyi n’enye anyi ihe oru aka gi choro maka oru gi. Site na Cranes rue gwongworo hydraulic, ihe nchekwa nchekwa na ihe sistemu yana ihe niile dị n'etiti. Anyị na-ejikwa nkwadebe ala, ndozi, ịnọdụ ala, nyocha, iji hụ na ịhọrọ saịtị kachasị maka ọrụ ike gị ga - emeghachite iji mee ka usoro nkwụghachi ụgwọ ngwa ngwa na uru ya.